सरकारले एउटा पेट स्क्यान मेशिन पनि किन्न सकेन « News24 : Premium News Channel
सरकारले एउटा पेट स्क्यान मेशिन पनि किन्न सकेन
क्यान्सर रोगको उपचारमा महत्त्वपूर्ण मानिने पेटस्क्यान मेसिन खरिद गर्न सरकार असफल देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेसिन खरिदका लागि पछिल्लो तीन वर्षयता लगातार बजेट छुट्याउने गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । पछिल्लो तीन वर्षमा पेटस्क्यानका नाममा छुट्याएको बजेट एक अर्ब एक करोड पुगिसकेको छ, तर त्यो रकम फ्रिज वा रकमान्तर हुँदै आएको छ ।
०७० असारको पहिलो साता पेटमा कालो दाग देखिएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई क्यान्सरको आशंकामा थप उपचारका लागि जापान लगिएको थियो । जापानस्थित टोकियो विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा पेटस्क्यान गरेपछि उनमा क्यान्सर नभएको पुष्टि भएको थियो । जापानबाट फर्केलगत्तै तत्कालीन राष्ट्रपति डा. यादवकै विशेष निर्देशनमा पेटस्क्यान खरिद गर्न सरकार अघि सरेको थियो । सोहीअनुसार पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा १६ करोड रुपैया, आव ०७१/७२ मा ४५ करोड र चालू आव ०७२/७३ मा पुन: ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अघिल्ला दुई आवका बजेट खर्च खरिद प्रक्रियामै जान सकेन भने चालू आवमा पनि मेसिन खरिद हुन नसक्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।
क्यान्सरका बिरामीका लागि अत्यावश्यक हुने पेटस्क्यान मेसिन बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा राख्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सो अस्पतालले पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । ‘पहिलो वर्ष १६ करोड आएको थियो, हामी पेटस्क्यान मेसिनबारे अध्ययनमा लाग्यौँ, खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नै भ्याइएन,’ भरतपुर अस्पतालका निर्देशक डा. चिनबहादुर पुनले भने, ‘गत वर्ष ४५ करोड रकम आएको थियो, ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्‍यौँ, तर कुनै कम्पनीका लागि मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन गरिएको भन्दै विवाद भयो, अख्तियारमा मुद्दा पर्‍यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट समेत प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो । त्यसपछि त्यत्तिकै भयो । अहिले पनि ४० करोड रकम छुट्याएको छ, खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।